Daawo-Munaasibadii Xaflada Qalinjabinta Jaamacada Hargeisa iyo Khudbadihii Masuuliyiinta Dalka Somaliland. |
Daawo-Munaasibadii Xaflada Qalinjabinta Jaamacada Hargeisa iyo Khudbadihii Masuuliyiinta Dalka Somaliland.
Hargeisa(GNN):-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo waxa uu maanta ka qaybgalay qalinjebinta Jaamacada Hargeysa oo ay Dufcadii 14aad ka baxeen Arday dhan 1,126.
Madaxweynaha oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey munaasibadaasi ayaa yidhi “Waxaan jecelahay, in aan Madashan uga jeediyo, mahadnaq iyo salaan xambaarsan, nabadgelyo iyo naxariis EEBE dhammaan Mudanka, Marti-sharafta, Macalimiinta, Madaxda Jaamacadda iyo Masuuliyiinta kala duduwan, “Assalamu Calaykum Wa Raxmatullaahi Wa Barakaatu”.
Ugu horreyn, milgo iyo maamuus weyn bay ii tahay, in aan idinkala soo qayb-galo Xafladda Qalin Jebinta Dufcadda 14aad ee Jaamacadda Hargeysa.Mar labaadka, waxaan jecelahay, in aan halkan ka hambalyeeyo, dhammaan ardayda maanta qalin jebisay iyo waalidkoodii soo gargaaray, iyo cid kasta oo gacan ka geysatay, guushan ay gaadheen geesiyaashan aynu goobtan ku gelbinayno.
Waxaan qirayaa, in aad Jaamacadda Hargeysa ku samayseen isbeddel weyn iyo tayayn laxaad leh.
Waxaan qirayaa, in aad xaqiijiseen, in badan oo ka mid ah humaagii maskaxdayda ku sawirnaa hoggaamiye ahaan, iyo himilooyinkii Xukuumadda Xisbiga Kulmiye.
Anigoo ka duulaya aragtidan siyaasadeed ee kor ku xusan, oo ahayd humaag maskaxdayda ku sawirnaa hoggaamiye ahaan muddo dheer, Anigoo ka duulaya himilooyinkii Xisbiga Kulmiye, ee uu udub dhexaadka u ahaa horumarinta aqoonta, iyo tayeynta adeegyada waxbarashada, waxaannu Xukuumad ahaan xoog saarnay, sidii looga midho dhalin lahaa mabada’an ku fadhiya muhimadda weyn
Ilaahay mahaddii nasiib waxaad u yeelateen in aad wax ku barataan dalkiinii hooyo iyo baradii aad ku noolaydeen. Aqoontii maydaan dhammayn ee hada ayaa bilaabaysaan oo saaka waxaa la idin siiyey muftaaxii cilmiga ee dadaalka halkaa ka sii wada. Waxaan kale oo idin leeyahay deyn badanbaa idinku maqan ee dalka iyo dadka waxa ku soo celiya, waxaa ugu yar waxa aad qaban kartaan aqoon fidin iyo diyaarinta daraasado climiyeed oo ummad ahaan wax in tara.
1. Adkaynta nabadgelyada iyo midnimada dalka iyo dadka.
2. Dhiirigelinta maalgashiga caalamiga ah, si loogu abuuro dhalinyarada fursado shaqo, dhinaca kalena loo helo koboc dhaqaale.
3. La dagalaanka qabyaaladda iyo kala qoqobka bulshada.
4. La dagaalanka faafida balwadaha iyo dhaqamada xun xun ee dabar-goyen kara bulshada.
5. La dagaalanka tahriibka, doolka iyo dal nacaybka, taas oo loo baahan yahay in aynu aaminno dalkeenna hooyo, waxana qabsanno.